एसिडिटी किन हुन्छ? यसबाट बच्ने उपाय !! | सुदुरपश्चिम खबर
एसिडिटी किन हुन्छ? यसबाट बच्ने उपाय !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : १७ पुष २०७८ २१:०८
एसिडिटी अर्थात अम्लपित्त नेपालीहरुको आम समस्या हो । यसलाई नेपालीमा ग्याष्ट्रिक पनि भन्ने गरिन्छ ।
बद्लिदो जीवन शैली तथा खानपानका कारण पनि थुप्रै नेपालीहरुलाई एसिडिटीको समस्या हुने गरेको छ । एसिडिटी विशेषगरी खानपानसित सम्बन्धित समस्या हो ।
ग्यास वा एसिडीटीको समस्या भएमा पेटमा जलन हुने, पेट दुख्ने, अमिलो पानी आउने गर्दछ । अस्वस्थ्यकर खाना, समयमा खाना नखानु नै यसको प्रमुख कारण हो।
एसिडिटी हुनुको मुख्य कारण भनेको खानपिनमा हुने लापरवाही होे । आजकल मानिसहरु यत्ति व्यस्त छन् कि उनीहरुलाई खाने समय वा फुर्सद सम्म हुँदैन । जसका कारण मानिसलाई एसिडिटी हुने गर्छ ।
बढी मात्रामा भोजन गर्नाले पनि मानिसलाई अपचको समस्या हुने गर्छ । जसका कारण उनीहरुमा एसिडिटी पैदा हुन्छ ।
अत्याधिक मात्रामा धूपमान तथा मादक पदार्थको सेवनले पनि हाम्रो शरीरमा एसिडिटीको समस्या उत्पन्न गराउँछ । बासी खाना, दूध हालेको चिया, कफीले पनि मानिसमा एसिडिटीको समस्या बढाउने गर्छ ।
त्यतिमात्र हैन, खाना खानसाथ सुत्नाले पनि मानिसमा एसिडीको समस्या हुने गर्छ ।
७. भोक नलाग्नु÷ खान मन नलाग्नु
एसिडिटीबाट बच्न सबैभन्दा पहिले खानपानको तालमेल बनाउन जरुरी छ । त्यसको लागि तारेको तथा अत्याधिक मसला प्रयोग गरिएको खानबाट बच्नु पर्छ । त्यस्ैत, विहान खाली पेटमा मनतातो पानीको सेवन तथा नेपाली लसुुनको प्रयोगले पनि एसिडीटी हुनबाट तपाईलाई बचाउँछ ।
दैनिक नरिवल पानीको सेवन तथा गर्नाले पनि कव्जियत लगायत एसिडीको समस्या कम हुन्छ ।
एसिडिटी हुनेले घरमै बनाएको खाना खान आवश्यक छ । त्यस्तै, आवश्यक भन्दा कम खाना खाने, राती सुत्नु अगाडी मन तातो दूधको सेवन गर्नाले पनि एसिडीटीको समस्या कम हुन्छ । त्यस्तै, खाना खादाँ पचाएर खाने, समय समयमा खाना खाने, राती सुत्नुभन्दा करिब तीन घण्टा अगाडी खानाको सेवन गर्ने, समय समयमा खाना खाने गर्नु पर्छ ।
एक कप पानीमा आधा चम्चा बैकिङ्ग सोडा र दुई चम्चा कागतीको रस मिलाएर पिउनाले पनि एसिडिटी हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, एसिडिटीका कारण पेटमा हुने जलनबाट बच्न अदुवा, तथा कागतीको रसमा मह मिसाएर पिउन सकिन्छ । अधिक मात्रामा पानीको सेवनले पनि एसिडिटी हुन पाउदैन ।
दुधमा बेसार मिलाएर तथा ज्वानोमा वीरे नुन, लसुन, बेसार, हिंग मिसाएर पिउनाले पनि एसिडिटी वा पेटको जलन हुनुका साथै पेट फुलेको बस्दछ ।
बिहान खाली पेटमा चिया, क्यान्सरको कारण !!